Articles tagged 'africa youth games'
Age cheating stalks African sport 31 May 2014 GABORONE - African athletes have earned varying reputations over the years but one constant that has seemingly transcended through time is age-cheating. This week, the issue raised its head again at the on-going Africa Youth Games here in Botswana's capital where 52 African countries are battl...
Golfer Krog in good start 28 May 2014 GABORONE - Zimbabwe's leading junior golfer Stuart Krog opened his quest for an African Youth Games medal with a steady level-par 71 here at the Gaborone Golf Club yesterday. The African Youth Games golf challenge is being staged over three days in Botswana’s capital and is a 54 holes stroke p...
Lock, Dzenga begin medal hunt 27 May 2014 GABORONE - Zimbabwe's top junior tennis seeds Courtney Lock and Nicole Dzenga say they are not under pressure despite huge expectations as they take on the continents top tennis players here in this land locked southern African country. Lock and Dzenga begin their hunt for medals this morning ...
Young Cheetahs settle for bronze 26 May 2014 GABORONE - The Zimbabwe Under-18 Sevens rugby team blew hot and cold here on Saturday before eventually doing enough to settle for bronze at the ongoing Africa Youth Olympic Games. Having started so brightly with three wins from their opening three matches on Friday, the Young Cheetahs were fa...
Team Zim to travel in batches 20 May 2014 HARARE - Zimbabwe's Africa Youth Games team will travel in two batches for the second edition of the youth continental showpiece in an effort to minimise the time athletes will spend away from school. The Africa Youth Games begin in Gaborone tomorrow and run until May 31, with the landlocked S...